Nin sawirka lugtiisa loo isticmaalay xayeysiin sigaar oo dacwoonaya |
Nin sawirka lugtiisa loo isticmaalay xayeysiin sigaar oo dacwoonaya
Nin ku nool bariga Faransiiska oo 60 jir ah ayaa sheegay in sawirkiisa loo isticmaalay xayasiinta sigaarka isaga oo aan raalli ka ahayn. Shirkadda baakadda sigaarka ku xayasiineyso ayaa sawirka lugta go’an waxay u adeegsatay iney dadka uga digto cabista sigaarka.
Sawirka baakadda sigaarka lagu soo saaray dushiisa waxaa lagu qoray farriin ah “Cabista sigaarka wuxuu xiraa halbowlaha dhiigga.”
Ninkan u dhashay Albaaniya oo ku nool Metz wuxuu sheegay in lugta looga gooyey weerarki ka dhacay Albaaniya 1997-kii.
Qareenka ninkan u dooda wuxuu sheegay inuu dhacdadan kala xiriirayo komishiinka midowga Yurub.
Ninkan sawirkiisa la isticmaalay wiil uu dhalay ayaa sawirka marki ugu horreysay baakad sigaar sawirka aabbihii magaalada Luxembourg ku arkay sanadki hore , sida ay sheegeen warbahinta Faransiiska.
Baakadda uu waddada ku arkay ayuuna geeyey xaafaddooda si uu waalidkii u tuso.
“Walaalkeey xilligaa wuxuu ka soo laabanayey Luxembourg. Isaga oo wax hadal ah uu ka soo bixin ayuu kartoon sigarkasi uu ka buuxo ayuu miiska soo saaray” ayey tiri walaashii oo u warrantay wargeyska Le Républicain Lorrain.
“Waan la yaabnay, waana aamini weynay.”
“Qoyskana waxay xaqiiqsadeen lugta ku sawiran baakadda sigaarka iney tahay lugta aabbaheen”.
“Waa aabbahaan. Nabarrada lugta uga yaalla iyo calaamadaha ka muuqadaba,” ayey ku sii dartay gabadhiisa.
Ninka sawirka iska leh wuxuu sheegay inuu marnaba uu oggolaan in sawirkiisa la isticmaalo. Wuxuuna sheegay inuu aaminsan yahay in sawirkaasi laga qaatay Isbitaalka, xilliga sawirka laga qaadayna waxay ahayd xilli uu isbitaalka uu u tagay bal in loo heli karo qalab socodka ka caawiyo si uu ugala tashto.
Ninkan wuxuu muddo 20 sano ku dhawaad ah uu isticmaalayey biraha socodka loo adeegsado marki uu weearka 1997-kii ka dhacay Albania uu lugtiisa ku waayey.
‘Qiyaanada lagu sameeyey’
Qareenka qoyska dhibbanaha ah u doodaya Antoine Fittante, wuxuu sheegay in la xaqiijiyey lugtaasi iney tahay tii dhibbanaha.
“Nabarrada lugta kaga yaallo waa kuwa u gaar oo aan cid kale lagu khaldi karin. Tan kale ninkan lugtiisa fayoow lafteeda waxaa kaga yaalla calaamad dab hore, marka wey iska caddahay. Marka khubaradu iney sawirka cidda leh ay ogaadaan wax dhib ah kalama aysan kulmin oo wey u fududeed.”
“Waa arrin lala yaabo qofka isaga oo raalli ka ahayn in sawirkiisa loo isticmaalo baakadda sigaarka marka laga eego sharciga midowga yurub waa mid aad u adag.” ayuu yir Mr Fittante.
“Macmiilkeyga wuxuu dareemayaa in la khiyaanay, sharaftiisa meel looga dhacay, lixaadka uu la’ yahay in xayaysiis sigaar loo isticmaalo aad buu uga xumaaday guud ahaan arrinta uu la kulmay ma ah mid wanaagsan.”
Mr Fittante wuxuu warqad uu u qoray Isbitaalka isaga oo codsanaya sida uu sawirkiisa uu isbitaalka uga baxay isla-markaana loo isticmaalay.
Komishiinka Yurub ayaa lala xiriiray maadaama ay mas’uul ka tahay sawirradaasi in lagu dhajiyo dhammaan baakadaha sigaarka ee midowga Yurub ka soo baxa.
Mr Fittante wuxuu sheegay komishiinka yurub iney dhici karto sawirrada wuxuu ka isticmaalay keydka sawirrada, marki la xaqiijiyey cidda iska leh iyo lahaanshihiisa iyada oo oggolaasho laga helayo qofkii lahaa.
Dawlada Somaliland oo Markii ugu Horeysay Bilowday Tababarka Saraakiisha Ciidamada…
Qaybtii 4AAD-Qisadii Kabixistii Jeelka Hargeisa Mujaahid Sulub Ugaadhyahan, Dhacadadii Layaabka…
Dr Adna Aadan ismaaciil Oo Dadaal ugu Jirtay Citiraaf Raadinta…
Cabdirashiid Dahabshiil Oo Sharraxay Doorka Shirkadda Dahabshiil Group Ka Qaadato…
Madaxweynaha Somaliland Oo Ka Qayb-galay Aas Qaran Oo Loo Sameeyey…
Nuxurka Dooda iyo Khudbadihii Laga Jeediyey Shirweynihii Somaliland ee Lagu…
Halkan Ka Daawo-Muuqaal laga Diyaariyey Laamiga cusub ee Isku Xidha…
Waraysi Xasaasiya Wasiirkii Hore Madaxtooyada Jsl Maxamuud Xaashi Cabdi Oo…
Saleebaan Xaglo-toosiye oo lagu Soo Dhaweeyey Laascaanood iyo Ujeeddada Socdaalkiisa…
Maayirka Caasimada Hargeisa Oo ka Waramay Olole Dawlada Hoose Ku…
Gudida Qandaraasyada Qaranka jsl Oo Tartan U Qabatay 37 Shirkadood…
Daawo :-Siyaasi Ramaax oo u quusgooyey Ex-wasiir Max'ud Xaashi oo…
Daawo :-Agaasimaha Fulinta Koomishanka Xakameynta Aidska Somaliland oo Dalka Ku…
Daawo :-Dowlad Deegaanka Soomaalida Oo Samaynaya Isbadal Dhanka Xoriyada Hadalka…
Daawo :-Waa maxay sababta loo Joojiyey Furitaanka Hotelka peace Ee…
Daawo :-Hees Cajab Badan:- 5 Hablood Oo 5-ta Soomaliyeed U…
Suudaan oo magdhaw siinaysa dad ku wax yeelloobay weerarro argagixiso…